Ukudala Ukuhleleka Emnyameni Phezu Kotwa | WAY FM
Ukudala Ukuhleleka Emnyameni Phezu Kotwa
Genesise 1:1-5 Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba.Umhlaba wawuyihlane elingenalutho ,kwakungubumnyama phezu kotwa ,kepha uMoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi.UNkulunkulu wathi “makube khona ukukhanya” kwaba khona ukukhanya .UNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle ,uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama .UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini ;ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku ,kwaba ngukuhlwa ,kwaba ngukusa, usuku lokuqala .
Izinto osuke ungeke wazi zizokwenzeka empilweni ,zivamisa ukudala ukungahleleki .Ngikholwa sewuke wabhekana nalokho .Kodwa manje futhi kukhona lezizinto okwaziyo ukubona ukuthi zizokwenzeka ,okungathi uma sizivumela singagcina siwela eweni otweni uqobo .
Angazi noma sewuke wakucabanga yini ngalendlela kodwa sonke isenzo sikaNkulunkulu ngendalo ,siveza isithombe esinqala sikaNkulunkuluu ukudala ukuhleleka entweni eyi –chaos.
Genesise 1:1-5Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba.Umhlaba wawuyihlane elingenalutho ,kwakungubumnyama phezu kotwa ,kepha uMoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi.UNkulunkulu wathi “makube khona ukukhanya” kwaba khona ukukhanya .UNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle ,uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama .UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini ;ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku ,kwaba ngukuhlwa ,kwaba ngukusa, usuku lokuqala .
Nanso nebala la ilele khona .Kusemvelweni kaNkulunkulu ukuthatha into engabumbekile engamile ngendlela qede akhanyise ukukhanya kuyo ,bese alethe ukuhleleka.Yilokho kanye ayikhona .
Ngiyazibuza ukuthi mawujeqeza empilweni yakho yini le ongayibona eyi chaos engahlelekile ,edinga ukubukwa ,mhlawumbe ikhandwe ,kumbe ihlelwe kahle? Kungenzeka ngubudlelwane obumahlaphahlapha bamaklebhuklebhu ,ukubukwa kahle kwabo kungaletha ukuhleleka uma kubukwa ngeso lokukhanda impilo kukho kunjalo .
Ngoba ichaos ikushaya ikushonise phansi .Nakuba singeke sayisusa yonke ichaos ezimpilweni zethu ,kodwa eningi isekulawulweni yithi .Njengokuba abantu badalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu ,bekwazi ukungenelela uma sekunhlanhlatha izinto baziqondise kwi -chaos ezisuke seziyiyona ,ngakho ukuletha ukuhleleka empilweni kuyinto enhle lakhona uguquko ongakwazi ukulenza.
Dala ukuhleleka kwi- chaos ,njengokuba uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya ebumnyameni .
Yilona kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje..